Madaxa Xeerka Adeegga
Macmiilka Xisaabaadka Bukaanka:
Hannaanku waxa uu dhigayaa nidaam heer shirkadeed ah oo si fiican loo qeexay oo baaqiqa uu bukaanku ka masuulka yahay in uu bixiyo ah. Hannaanku waxa uu iftiiminayaa nidaam isku mid ah iyo tijaabo dabagal hawlaha la xidhiidha ururinta xisaabaadka bukaanka iyo u gudbinta xisaabaadka hay’ad bannaanka ah oo daynta ururisa.
Xarunta caafimaadka Valley waxay ogsoontahay culayska dhaqaale ee kharashka daawaynta caafimaadku uu ku abuurayo bukaanada ay xaddidan tahay ama aan lahayn caymiska daryeelka caafimaad. Bukaanada aan lahayn caymiska waxaanu ka daynaa kharashka badh sida aanu shirkadaha caymiska ee aanu heshiiska kula jirno uga dayno.
Bukaanada aan caymiska lahayn waxaanu u fidinaa ikhtiyaarada qayb looga cafinaayo bixinta baaqiga ku haray. (Fadlan tixraac xeerka Ciddii aan Lahayn Caymis & Wax ka Danta Lacagta marka wakhti hore la bixiyo.)
Bukaanada ama cidda bixinaysa kharashka ee muujiso caqabad keenaysa inaanay ku bixinin baaqiga mar kaliya waxaa la siin doonaa heshiis lacag-bixin muddo dheer ah oo ilaa 12 bilood ah, oo aanay ribo la socon. Inta ugu yar ee la bixinayaa waa inay tahay
$50 dhammaan xisaabaadka isbitaalada iyo $25 dhammaan xisaabaadka dhakhaatiirka, oo aanay ka badan muddo 12 bilood ah. Haddii aanu bukaanka ama cida bixinaysaa ayna ku bixin karin 12 bilood ee la siiyay iyada oo dhan, maalgalinta bangiga ayaa la siin doonaa.
Dadaalada ururinta daymaha ee Valley Medical Center waxay raacdaa nidaamka Gobolka WA (Washington) iyo shuruucda Medicare / Medicaid.
Sheegista amaahda ayaa iman 300 maalmood kadib marka la soo saaray qaansheegtii ka bixidda isbitaalka kadib ee koowaad.
Valley waxay wargelin doonaa bukaanka ama cidda bixinaysa baaqiga hadhsan ee lagu leeyahay iyada oo 4 ogaysiis u diraysa. Haddii baaqiga xisaabtu yahay >$50.00, taleefano ayaa loo dirayaa cidda bixinaysa lacagta ilaa 25 maalmood kadib marka bayaanka koowaad ee xisaabaadka la diray.
Haddii kharashka oo dhan aan la bixinin, ama heshiis kale aan la galin, oo ay xisaabtu gaadho muddadii 120 maalmood ahayd, oo la buuxiyay dhammaan shuruudihii, xisaabta waxaa masuuliyaddeeda lagu wareejin doonaa hay’adda daymaha ururisa oo xirfadlayaal ah.
Valley Medical Center waxay diyaarin doontaa bayaanka baaqiga bukaanka marka ay jawaab ka hesho shirkadaha caymiska. Kadib marka laga helo kharashkii laga sugayay caymiska., Valley waxay wargelin doontaa bukaanka ama cidda bixinaysa baaqiga hadhsan ee lagu leeyahay iyada oo 4 ogaysiis u diraysa. Haddii baaqiga xisaabtu yahay >$50.00, taleefan ayaa loo dirayaa cidda bixinaysa lacagta ilaa 25 maalmood kadib marka bayaanka koowaad ee xisaabaadka la diray.
Haddii kharashka oo dhan aan la bixinin ama heshiis kale aan la galin, oo ay xisaabtu gaadho muddadii 120 maalmood ahayd, oo la buuxiyay dhammaan shuruudihii xisaabta waxaa masuuliyaddeeda lagu wareejin doonaa hay’adda daymaha ururisa oo xirfadlayaal ah taas oo heshiis kula jirta isbitaalka